Android Auto - Google Maps, Media & Messaging 4.5.592854-release Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.5.592854-release လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
Application မ်ား ကား & ယာဥ္မ်ား Android Auto - Google Maps, Media & Messaging
Android Auto - Google Maps, Media & Messaging ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အန်းဒရွိုက်အော်တိုချိတ်ဆက်, သင်အာရုံစိုက်နေဖို့ကူညီပေးသည်, Google လက်ထောက်နှင့်အတူဧည့်ခံကြောင်းကိုသင်၏မတ်မောင်းနှင်မှုအဖော်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ရိုးရှင်းသော interface ကို, ကြီးမားတဲ့ခလုတ်များနှင့်အစွမ်းထက်သောစကားသံလုပ်ရပ်များနှင့်အတူ, အန်းဒရွိုက်အော်တိုသင်လမ်းမပေါ်တွင်နေသူကပိုမိုလွယ်ကူသင့်ဖုန်းမှသငျသညျခစျြသော apps များသုံးစွဲဖို့လုပ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ကိုယ့်ဖို့ "Ok Google" ဟုဆိုသညျကား ...
• Real-time ဂျီပီအက်စ်အညွှန်းနှင့်ယာဉ်အသွားအလာသတိပေးချက်များနှင့်အတူ Google Maps ကိုသို့မဟုတ် Waze အား အသုံးပြု. သင်၏နောက် destination သို့လမ်းကြောင်း။
• Real-time ၌သင်တို့၏လမ်းကြောင်းအပေါ်နောက်ဆုံးသတင်းများ, ETA နှင့်အန္တရာယ်များကိုရယူပါ။
သငျသညျရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်မှာသင်သိနိုင်အောင်•ကို Google လက်ထောက်သငျသညျအဘို့သင့်ပြက္ခဒိန်စစ်ဆေးပြီ။
•ကားမောင်းနေစဉ်မိမိစိတ်ကြိုက် setting အားဖြင့်ကားမောင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုမနှောက်ယှက်ပါနေချိန်တွင်အာရုံပြံ့လှငျ့ရှောင်ကြဉ်ပါ။
• Google မှလက်ထောက်ကို အသုံးပြု. ဖုန်းခေါ်ဆို Make ့ကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူဝင်ခေါ်ဆိုမှုဖြေပါ။
• Access ကိုသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ဖိုင်တွဲများနှင့် SMS ကို, Hangouts ကို, WhatsApp ကို, Skype ကို, ကြေးနန်း, WeChat, Kik Google က Allo နှင့်များစွာသောပိုပြီးစာတိုပေးပို့ရေး app များကို အသုံးပြု. Google ကလက်ထောက်နှင့်အတူမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့နှင့်လက်ခံရရှိသည်။
•သင့်ဖျော်ဖြေရေးစနစ်ကဘယ်တော့မှမပြုမီနဲ့တူများကိုစီမံကွပ်ကဲ။ အမြင့် Fidelity Music ကိုလွှင့်ထုတ် Napster, Music, နှင့် Deezer - Spotify, ပန်ဒိုရာ, iHeartRadio, Google ဂီတ Play, Amazon က, Music, SiriusXM, ဒီရေတို့အပါအဝင်သင်အကြိုက်ဆုံးမီဒီယာ apps များနားထောင်ပါ။ အတော်များများကပိုဂီတ, ရေဒီယို, သတင်း, အားကစားသတင်းများ, အော်ဒီယိုစာအုပ်များနှင့် Podcast တခုကို apps များကိုလည်းထောက်ခံနေကြသည်။
သဟဇာတ apps များအရေအတွက်အမြဲကြီးထွားလာနေပါသည်! သဟဇာတ apps များအပြည့်အဝစာရင်းများအတွက် http://g.co/androidauto ကိုသွား
အန်းဒရွိုက်အော်တိုသုံးစွဲဖို့, သင်က Android 5.0 သို့မဟုတ်မြင့်မားသောအပြေးတစ်ဦးဖုန်းမှ (Lollipop, Marshmallow, Nougat, ဒါမှမဟုတ် Oreo) နှင့်တစ်ဦးတက်ကြွဒေတာဆက်သွယ်မှုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
400 ကျော်ကကားမော်ဒယ်များယခုအန်းဒရွိုက်အော်တို support! သင့်ကားခင်းကျင်းပြသသဟဇာတနှင့်မည်သို့ပြုလုပ် enable သင့်ရဲ့ပိုင်ရှင်၏လက်စွဲစစ်ဆေးသို့မဟုတ်သင့်ကားရဲ့ထုတ်လုပ်သူကိုဆက်သွယ်ပါလျှင်ထွက်ရှာရန်။ ပြီးတာနဲ့ enabled, သွားရဖို့က Android Auto ကိုဖွင့်လိုက်ပါဒါဆိုရသင့်ကားရန်သင့်ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ရန်အရည်အသွေးမြင့်ကို USB cable ကိုအသုံးပြုပါ!
http://android.com/auto မှာ Android ကိုအော်တိုနှင့်သဟဇာတကားများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
Android Auto - Google Maps, Media & Messaging အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Android Auto - Google Maps, Media & Messaging အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Android Auto - Google Maps, Media & Messaging အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Android Auto - Google Maps, Media & Messaging အား အခ်က္ျပပါ
android777 စတိုး 34.99k 6.78M
Android Auto - Google Maps, Media & Messaging ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Android Auto - Google Maps, Media & Messaging အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.5.592854-release
လက်မှတ် SHA1: 9C:A9:1F:9E:70:4D:63:0E:F6:7A:23:F5:2B:F1:57:7A:92:B9:CA:5D
ထုတ်လုပ်သူ (CN): gearhead
Android Auto - Google Maps, Media & Messaging APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ